Ebee ka a kpọrọ Rut aha na Baịbụl?
Encyclopedia nke okwukwe Katọlik
Kraịst na ndị ozi
Nye bụ Ruth n'ime Bible?
Ebee ka akụkọ Rut na Neomi nọ?
Gịnị ka Rut na -akụziri anyị na Baịbụl?
Ụmụ ole ka Rut mụrụ?
Onye kwuru Arịọla m ka m hapụ gị pụọ n'ebe ị nọ?
Olee ndị a kọrọ akụkọ ha n'akwụkwọ Rut?
Gịnị bụ aha nwa nwa Neomi?
Nso ke Ruth ada aban̄a?
Olee ụmụ ndị mụrụ Rut?
Gịnị ka aha Rut pụtara?
Rut bụ nwa -ab bornọghọ amuru n'ọhịa Moab, n'ihi ya ọ bughi nke umu Israel. Neomi Oge Onye Izrel. Ya na di ya na ụmụ ha abụọ gara biri na Moab mgbe nri dị ụkọ n'Izrel. Di Neomi nwụrụ, ụmụ ya ndị nwoke abụọ alụọ ndị Moab aha ha Rut na Orpa.
Es O siri ike ịchọta akụkọ ịhụnanya n'etiti ụmụ nwanyị abụọ n'oge ochie, Akwụkwọ Nsọ na -enye anyị otu n'ime ihe kacha pụta ìhè. Akwụkwọ nke Ruth gwa anyi akụkọ ihe mere eme n'etiti bu, maobita, na nne di ya Noemí. Mmekọrịta nke Chineke gọziri na nke ahụ bụ nna nna Devid ma ọ bụ Jizọs n'onwe ya.
Isi isiokwu nke akwụkwọ nke Rut ọ bụ mgbapụta, nke gbasara anyị niile. Rut Ọ bụ onye mba ọzọ, enweghị ụmụ, bụrụkwa nwanyị di ya nwụrụ, nke mere ka ọ daa ogbenye na enweghị nkwado. Ka o sina dị, Rut O ji ikwesị ntụkwasị obi nabata ozi -ọma wee sonyere ndị ọgbụgba -ndụ nke Onye -nwe.
15 Ndien Naomi dijo: Lee, ọgọ nwanne gị alaghachikwuru ndị ya na chi ya; ị laghachi azụ ya. 16 Rut we si, No -è rịọ m ka m hapụ gị na nke ahụ aM kewapụrụ gị; n'ihi na ebe ọ bụla ị na -aga, bAga m aga, ebe ọ bụla ị bi, m ga -ebi. Ndị gị ga -abụ ndị m, Chineke gị ga -abụkwa ndị m dChukwu
Ọ BỤ mmasị: Kedu ihe dị mfe ikwu na agbagharala gị mmehie gị nkọwa?
NKỌTARA aha ndị akparamagwa dị n'akwụkwọ Rut
Ụlọ ọrụ ELIMELEC
Chi m bụ eze
NAOMI / MARA Nwanyị Elimelek The ilu
ORFA Nwunye Makhlon Onye na -atụgharị ya azụ
AKỤKỌ Di Rut Oriri
RUT Nwunye Neomi Onye mmekọ
Rut na Boaz mụrụ nwa nwoke ha kpọrọ Obed, na Noemí nyere ha aka ilekọta ya. Obed toro wee mụọ ụmụ na nke ya nieto Ọ bụ Eze Devid. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, ezinụlọ ahụ ga -amụ Jizọs.
Okwu Rut, n'asụsụ Spanish kwa Ruth, es aha onwe nwanyị nke Akwụkwọ Nsọ, nke sitere na Hibru רות (re'ut), nke sụgharịrị dị ka 'enyi', 'mmekọ'.
Bible na -egosi ihe kpatara ya ndị mmadụ nke dike Rut. Rut, onye mba ọzọ zuru oke, ga-abụ nne nne nke eze kachasị ukwuu nke Israel. Obed amụọ Jesi, onye bụkwa nna nke nnukwu Eze Devid. Ọ bụ site n'usoro Devid que Mezaịa bịara n'ụwa.
aha nke Agba Ochie. Etymology ya es ejighị n'aka, n'agbanyeghị agbanyeghị na a na -atụgharị ya dị ka mgbachi nke okwu Hibru re'ut ('enyi' ma ọ bụ 'ịma mma').
Nso ikedi mbet Jesus 12?
Gịnị ka a na -akpọ ndị ozi iri na abụọ ahụ? Aha ndị -ozi iri na abụọ bụ: n’ime
Gịnị mere okpueze Kraịst anaghị agba ntoju?
Gịnị mere akwụkwọ nke okpueze Kraịst ji acha odo odo? Agba
Ajụjụ gị: Gịnị bụ ọrụ Hogar de Cristo?
Kedu onye na -akwado Hogar de Cristo? “Anyị chọrọ onyinye nke obodo, Hogar
Azịza ọsọ ọsọ: Onye bụ Claudia n'ime Jizọs?
Olee otú nwunye Paịlet si nwụọ? Onye bụ Pọntiọs Paịlet na gịnị bụ nke ya
Olee otú Jizọs si ahọrọ ndị na -eso ụzọ ya?
Gịnị ka Jizọs nyere ndị na -eso ụzọ ya iwu ka ha mee? Na Luk, Jizọs nyere ndị na -eso ụzọ ya ọrụ
Ajụjụ: Gịnị bụ ụlọ Kraịst na Peru?
Kedu ihe mere Hogar de Cristo? Hogar de Cristo na -eche mmechi na mbugharị ya
Ndewo ebe ahụ! Aha m bụ Alberto. Na blọgụ m, ana m ekerịta akụkọ na -atọ ụtọ gbasara nkuzi Katọlik, ozizi nke okwukwe, na oriri nsọ.
Ajụjụ a na -ajụkarị: Gịnị ka okwu ahụ kara njọ pụtara n'ime Akwụkwọ Nsọ?
Azịza kacha mma: Kedu ka amụrụ Virgin Mary?
Ị jụrụ: Olee ozi mmụọ ozi ahụ na -ezi ndị ọzụzụ atụrụ?
Ajụjụ a na -ajụkarị: Gịnị ka anyị na -echeta na Lent na n'izu nsọ?
Gịnị bụ okpukpe Amụma?
Gịnị ka Jizọs gwara ndịozi?
Kedu ka esi ewepụta Mmụọ Nsọ n'ụbọchị Pentikọst?
Syn Nzukọ ọgbakọ nke 2021
Ndi ana-akpo | Onye anyị bụ | Nzuzo na kuki amụma
Aa Ntị nye ndị njide ziri ezi! Edebere ihe niile na saịtị ahụ naanị maka ebumnuche ozi na ebumnuche! Ọ bụrụ na ị kwenyere na ikenye ihe ọ bụla mebiri ikike nwebisiinka gị, jide n'aka na ịkpọtụrụ anyị site na ụdị kọntaktị a ga -ewepụ ihe gị.